Ukuba ufuna ukusebenzela iApple, jonga iwebhusayithi yabo entsha | Ndisuka mac
Kithi sonke sithanda iApple kwaye sinezixhobo zohlobo, asinazo nje kuphela ezikumgangatho wazo kunye nobuhle. Yenye into, iApple ayisiyiyo eyakho i-iPhone okanye iMac, iphantse yafana nendlela yokuphila. Kungenxa yoko le nto phantse sonke sizibuze ukuba kunganjani xa sinako ukusebenza kwinkampani kodwa kubonakala ngathi ikude kakhulu kwaye ayifikeleleki. Ayizukuphinda ifane naleyo kwakhona enkosi kwiwebhusayithi entsha ephehlelelwe yinkampani nalapho sinokubona khona Umsebenzi obonelelweyo
1 Umsebenzi e-Apple wenziwa zizinto ezithile kwaye siyakhunjuzwa ngale nto kwiwebhusayithi entsha
2 Kwiphepha elitsha kukho icandelo elinesihloko esithi "Life in Apple"
Umsebenzi e-Apple wenziwa zizinto ezithile kwaye siyakhunjuzwa ngale nto kwiwebhusayithi entsha
Imisebenzi e-Apple ligama le iwebhusayithi entsha yenkampani apho sinokubona khona umsebenzi ophehlelelwa yinkampani kwaye sikwazi ukuzalisekisa iphupha lethu lokusebenza kwenkampani eyenza izixhobo esizisebenzisayo. Kuya kuba kuhle ukubasebenzela, ukuba kungenxa yesaphulelo somsebenzi abanaso kwizixhobo kwibhloko. 😉
Iwebhusayithi eyilwe ngokutsha ithathe indawo yewebhusayithi endala "Imisebenzi eApple" ebisele ikhona. Le webhusayithi intsha ihlaziyiwe ngakumbi kwaye ivula nengcaciso yento onokuyilindela ukuba uqeshwe kwinkampani.
I-Apple kulapho uya kusebenza nabanye abantu ababelana ngothando lwakho. Apho ishishini lisebenza amava. Apho intlonipho esempilweni yesibindi kunye nokucinga kwantlandlolo kukukhuthaza ukuba uzise konke okusemandleni kwinto esiyenzayo kunye.
Kuyakhankanywa ukuba I-Apple iququzelelwe bubuchule obusebenzayo endaweni yeeyunithi zeshishini. Iingcali zehardware zijolise kwizixhobo zekhompyutha, iingcali zesoftware zijolise kwisoftware, kwaye iingcali zoyilo zijolise kuyilo. Oku kwahlukile kuninzi lweenkampani ezinkulu. Iingcali zigqiba kwinto eziyaziyo kwaye azikhokelwa ngabangengobuchwephesha kulo mbandela.
Iinkokheli zeApple dibanisa amava abo nezinye iimpawu ezimbini ezibalulekileyo: ukuntywiliselwa kwiinkcukacha kunye nokuzimisela ukwenza ingxoxo ngentsebenziswano xa kusenziwa izigqibo ngokudibeneyo.
Kwiphepha elitsha kukho icandelo elinesihloko esithi "Life in Apple"
Kukho icandelo elahlukileyo "loBomi e-Apple" elijonga kwakhona injani ubomi bemihla ngemihla kwinkampani Nje ukuba bakuqeshe, kubandakanya amaxabiso, izibonelelo ... njl.
Kuninzi kuwe kunokuba umntu akwaziyo. Thatha amava akho aphilileyo uye kwiApple kwaye ubone ukuba kuninzi kangakanani ekufuneka ukwenzile, wabelane kwaye ufumanise. Kuba apha, siyakwamkela ukuba ungubani kwaye ufuna ukuba ngubani.
Kukho imingxunya kuwo wonke umntu okule nkampani. Umyalezo olungileyo ongashiyi ungakhathali. Sonke sinokufika sisebenze eApple. Leyo yimvakalelo abafuna ukuyidlulisa. Ukwahluka kukwabandakanywa kwaye ukubandakanywa kwamkelekile. “Xa sizisa wonke umntu, singenza owona msebenzi ubalulekileyo ebomini bethu kunye. Yiyo loo nto siqhubeka ukomeleza ukuzibophelela kwethu ekunikezeleni ngomsebenzi wexesha elide ngemizamo enjengokugaya okubandakanya wonke umntu nophuhliso kunye nentlawulo efanelekileyo kubo bonke.
Kugxininiswa kakhulu amabali abanye abantu abaqeshwe yinkampani. Ubungqina bobunyani bokwenyani Baziva ngathi iApple ibaphatha ngendlela enesidima kwaye ibanike indlela yokuphuma xa ezinye iinkampani bezivalile iingcango zabasebenzi. Njengokuba ufunda amabali okanye isishwankathelo sokuba kutheni bekhethe le nkampani ukuba bayisebenzele, uyaqonda ukuba uncoma iimpawu inkampani enazo. Ukubandakanywa, ukuba bucala, ukurisayikilisha, okusingqongileyo, ubunkokeli kunye nezinye ezimbalwa.
Inyathelo elilandelayo ukujonga umsebenzi kukucofa ku i «Profile» isithuba (iprofayile) kwaye kuya kufuneka ufake i-ID yakho ye-Apple. Njengoko ugcwalisa uhlobo lwekharityhulam uya kuba nokufikelela kwezinye iiprofayili zomsebenzi okanye ezinye. Konke kulula kakhulu kwaye oko kukuvumela ukuba uzame ithamsanqa lakho ngamanyathelo ambalwa kwaye mhlawumbi kwiinyanga nje ezimbalwa uya kuzibona usebenzela inkampani eyenza izixhobo ozisebenzisa mihla le.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » Ukuba ufuna ukusebenzela iApple, jonga iwebhusayithi yabo entsha